Madaxweyne Lafta-gareen oo gaaray Muqdisho (SAWIRRO) | Universal Somali TV
Madaxweyne Lafta-gareen oo gaaray Muqdisho (SAWIRRO)
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, ka dib markii ay ka soo amba-baxeen Magaalada Baydhabo.
Wafdiga Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Aadan Cadde, iyadoona ay ku soo dhaweeyeen Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay hoolka nasashada ee Garoonka Aadan Cadde ayaa u mahadceliyay Wasiiradii, Xildhibaanadii iyo dhammaanba dadkii kale ee maanta ku soo dhaweeyay Garoonka Magaalada Muqidsho.
Mar uu ka hadlayay ujeedada ay u yimaadeen Magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inay la xiriirto arrimo shaqo oo isugu jira wadatashi iyo fatahadaha ka dhashay Webiga Shabelle, ee sida weyn u saameeyay qaybo ka mida Gobolka Shabellaha Hoose.
Madaxweyne Lafta-gareen ayaa xusay inay qorsheynayaan in booqasho ku taggaan dhulka Gobolka Shabellaha Hoose, ee sida weyn uu u saameeyay Webiga Shabelle, si ay u soo qiimeeyaan inta uu le'eg yahay dhibaatada bulshada deegaanka ka soo gaartay fatahaadahaasi.
Kan-xigaCabdiraxmaan Mucaawiye oo loo magacaa...
Kan-horeUrurka Qareenada oo ka horyimid magac...
Madaxweynaha Puntland oo furay shirka 4aad ee Ururka Warbaahinta MAP
Rag hubeysan oo nin dhalinyaro ahaa ku dilay Beledweyne
59,409,643 unique visits